ဓမ္မရသ: အပြု၊ အဖျက်ဤနှစ်ရပ်ကို ပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပါလော့..၊
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 28.9.08
ကိုးကွယ် မှူ ဆို တာ ကိုယ့် အနေ နဲ့. ထင် မြင် ချက် ပေးဘို. မကောင်းပါဘူ။ သူ့ ယုံ ကြည် ချက် နဲ့ သူ ရှိပါစေ လေ။ မကောင်းတာ လုပ်နေတာ မှ မဟုတ်ဘဲ. ကိုယ် ကိုယ် တိုင် လဲ ဘုရား တရား ကို ကို ကိုးကွယ် ပါတယ။် ကျန်တာ ကို ကိုယ်ကို တိုင် က ဘာ မှ မလုပ် ပေမဲ. သူ ယုံ့ ကြည် ချက် ကလေး နဲ့ သူ့ စိတ် ချမ်း သာ မှူ နဲ့ ရှိပါစေ လေ. လူတွေဟာ သိတ် ဒု က္ခရောက် လာ တဲ့ အခါ ကြရင် ဆောက် တည် ရာ မရ ဖြစ်တတ် လေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အခါ မှာ သူ့ မှာယုံ ကြည်ချက် ကလေးတခု. အား ကိုး ရာ လေး တစ်ခု ရှီိရင် သူ ဆောက်တည် နိုင်မှာ ပါ။ အလွန် အကျွှံ မဖြစ် ခဲ့ရင် ပြီး တာ ပါဘဲ လို. ဆွေး နွေး လိုပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။ အခုအခါမှာ ဘိုးတော်၊ မယ်တော်တွေ ဘုရားရင်ပြင်တော်မှာ နေရာအပြည့်ယူထားတတ်ကြပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ အခုလို ပိုစ့်လေး တင်ပေးတဲ့အတွက်။
ကျွန်တော်ကတော့ သာသနာကို ထိခိုက်သော ကိုးကွယ်မှုများကို မလိုလားပါ။
တတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ကိုးကွယ်လိုသူများ၊ အားကိုးသူများ သီးသန့်ကိုးကွယ်ပေါ့။ မရောယှက်စေချင်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် မရှိစေချင်ပါ။
လူအတော်များများက အရမ်းကာရော ကိုးကွယ်နေကြတယ်။ ခက်ပ။
ဟုတ်ပါတယ် အစ်ကို.. ဘိုးတော် မယ်တော် ရုပ်တုတွေကို ဘုရားနဲ့ တစ်တန်းထား ကိုးကွယ် နေကြတာ ကတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်ဘူး.။
ညီမတို့ အိမ် မှာ ဘုရားကလို့ဘာမှ မကိုးကွယ်ဘူး.. ဘယ်သူဘာပြောပြော.. ။ရတနာ မြတ်သုံးပါးက လွဲလို့လည်း အားကိုးရာ မရှိပါဘူး..။
ဒီပိုစ့်လေးကို လဲ အားလုံးကိုဖတ်စေချင်ပါတယ်... ။
ကျေးဇူးပါပဲ အစ်ကိုရေ.. ဒီထက်လည်းသာသနာတွေ ပြုနိုင်ပါစေ..
အတွေးအခေါ်တွေ ခေတ်မှီတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်။ သဘောထားခြင်းတိုက်ဆိုင်တယ်ဗျို့။ သသနာဆိုတာ ရောနေတာတွေ သိပ်များလာရင် မကောင်းတော့ဘူး။
ဘုရားတရားကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်သလို.သူတို့စိတ်သောကရောက်နေချိန်လေးမှာ.ဒီလိုကိုးကွယ်မှု့လေးတွေကရှိကြပါတယ်.ဖြစ်နိုင်ချေရှိသမျှလေးတွေကိုသူတို့ဖက်တွယ်ထားကြတာပါ..အလွန်အမင်းသူမှသူဆိုတာမျိုးမဟုတ်ရင်ကောင်းတာပေါ့..khin oo may ဆွေးနွေးသွားတာလေးကိုသဘောကျတယ်
ဗဟုသုတရတဲ့ post ပါ...
သူ့နေရာနဲ့သူရှိတာပဲကောင်းပါတယ် ဒီပိုစ့်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါ ကိုအောင်ဦး
ဗဟုသုတ ရတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုပါကွယ်။
ကျနော်ကတော့ သာသနာတော် သန့်စင်ပြီးမှ ပြန့်ပွားဖို့ အယူ အဆကို တင်ပြလိုပါတယ်...
သာသနာတော်သန့်စင်ရေးဆိုတာ သတိအမြော်အမြင်ကြီးတဲ့ သူတော်ကောင်းတွေအပေါ် မှီခိုနေပါတယ်...
စစ်မှန်သော သဒ္ဓါတရားဖြစ်လာမှသာ မိမိကိုးကွယ်နေတဲ့ မစစ်မှန်တဲ့ အယူကို စွန့်လွှတ်နုိုင်မယ် လို့ ယူဆပါတယ်.. တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဘာမှတော. မပြောလိုပါဘူး မှားတာထဲကသင်ခန်းစာ၇သွား ပါလိမ်.မယ် မှန်တာမှားတာဆိုတာကလဲ အမြင်မှန်မ၇သေးလို. လို.ဘဲအ၇င်ယူဆလိုက်ပါ ကိုတော.၇ဟန်းတွေသွေးမြေကြ၇ ကထဲက သိလိုက်တယ်နတ်တွေဟာအားထား၇ာတွေမဟု ဘူး သာပေါင်းညာစားတဲ.သဟာတွေ..ဘယ်.နှယ်ဗျာနေ.စဉ်၇ဟန်း တော်တွေကအဲ.ဒီနတ်တွေကို အမျှဝေဆုတောင်းပေးတယ်အခု ၇ဟန်းတော်တွေသွေးမြေကြဆင်းတာကိုဒင်းတို.ဒီအတိုင်းကြည့် နေကြတာလား ဘယ်ေ၇ာက်ကုန်ကြသလဲဆိုတာ..တွေးမိပါ.. အခုထက်ထိပါဘဲ.အခုအိမ်မှာ၇ှိတဲ.နတ်ကိုလဲသဘိပ်မှောက်ထား တယ် အိမ်ကခလေးတွေကိုလိမ်မာအောင်ပညာတတ်ကြီးတွေ ဖြစ်အောင်အချင်းချင်းချစ်ခင်အောင်လုပ်ပေးလို.ပြောထားတယ် အမှန်ကိုပြောချငိးဖြစ်ပါတယ် ပစ်မှားချင်းမဟုတ်ပါ..